Waan nama soomanu ibaadarratti gargaaru Waan nama soomanu ibaadarratti gargaaru - articles
1-Sodaa Rabbii Qabaachuu fi hamtuu hundarraa uf eeguu.
2-Qaraatii qur'aanaa Heddummeessuu, Zikrii fii kadhaa Rabbii heddumeysuu,
3-Saahibban fofokkataa irraa fagachuu. Namni saahiba fakkata jallaa qabu wahuma hamtuu isarraa barata. Mammaksatti raaddi harreen wajji oolte dhuufuu barti'' jedhan.eegaa nama gaarii qajeelaa Rabbi sodaatu saahiba (shariika) godhadhaa.
4-Masgiidatti maxxanuu fii salaata jamaa'aa irratti uf tiiysuu.hanga dandeessetti yeroo hedduu masjiidatti argamuu yaalii godhi. Masjiida teessee sunnaa salaattee, zikrii gootee, Rabbi kadhattee, qur'aana qaraatee, yoo jette Sawaaba hedduu walitti tuulatte, badii dhagayuufii arguu jalaayis nagaya baate (tiiyfamte). Tanaaf gara masjiida gara masjiida.
5-Waan fedhii lubbuu namatti kakaasuu fii waan qalbii nama goggoysu laaluu irraa fagaachuu.kunis hedduudha fakkeenyaaf:-filmii fii suuraa baalagummaa fokkataa daw'achuu, kanneen televijiina, vidiyoo, intarneeta, yutub, fesbuuk, waatis aab, tuweytir, iskaybe, baaltook,fi kkf irraatti badii gadi dhiifamtee facaafamtu daaw'achuun haalaan dhoowwaadha.
6-Dogogoraa fi badii irraa fagaachuu.
7- Nama hamachurraa uf eeguu, farada (lukkee) tahurraa, kijibarraa, nama xiqqeysu fii k.k.f. irraa Arraba ufii tiiysuu .
8-yeroon qaalii tahuu isii beekanii itti fayyadamuu.
9-guddina kabajaa baatii tanaa beekanii eeggachuu.
10-ummata gaggaarii dur kan ibaadaa irratti jajjaboo turan seenaa isaanii barachuu fii jala deemuu.
11-Lubbuu ufii qorachuu.
12-Towbaa irra deddeebi'anii haarawoomsuu.